डिथ्री अनलाईनको पहिलो वार्षिकोत्सब सम्पन्न (भिडियो) - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १५, २०७६ समय: १६:०२:४५
ईटहरी/ मोफसल ईटहरीबाट संचालित पुर्वको कला र मनोरञ्जनको एक मात्र डिजिटल मिडियाको रुपमा परिचीत डिथ्री अनलाइनले औपचारिकताको पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ । गतवर्षको बैशाख १३ गते ईटहरी स्थित धरानलाईनमा प्रधान कार्यालय स्थापना गरेर औपचारिक रुपमा सुरु भएको डिथ्री अनलाइनले एक भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरि वार्षिकोत्सब मनाएको हो । हेर्नुस सम्मानित हुनेहरुको बायोग्राफी भिडियो
कृश प्रकाउ प्रकरणमा के सुनसरी प्रहरी चिप्लेकै हाे त ? सिसि क्यामेराको भिडियो फुटेज सहित
भिडियोका लागि तल क्लिक गर्नुहोसः
लकडाउनले गर्दा थलिदै कृषि पेशा (भिडियो रिपोर्ट सहित)
इनरुवा। करिब दुई महिना लामो लकडाउनको चपेटामा देश थला परिसकेको अवस्था छ। कोरोना भाइरस माहामरिको त्रासले गर्दा दैनिक जनजिव...
यसरी हुदैछ इनरुवामा राहत वितरणका लागि पुर्व तैयारी (भिडियो)
भिडियोकालागि तल क्लिक गर्नुहोस्ः
कोभिड १९ सम्बन्धि डा. मदन कोइराला संग विशेष कुराकानी (भिडियो)
लकडाउनका बेला विराटनगरको सडक (भिडियो)